Dagaal ka dhacay Gobolka Hiiraan & faah faahin kasoo baxeysa | Banaadir Times
HomeUncategorisedDagaal ka dhacay Gobolka Hiiraan & faah faahin kasoo baxeysa
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in ay weerareen Saldhig Ciidamada jabuuti oo ka tirsan AMISOM ku leeyihiin degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.
Dagaal geystay khasaaro kala duwan ayaa waxaa la sheegay in uu degmada JalalAqsi ee Gobolka hiiraan uu ku dhex-maray Ciidamada Jabuuti iyo Ururka Al-Shabaab, waxaana dagaalkaas laga helayaa faah faahino kala duwan.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kale ay jireen tiro madaafiic ah oo ay is weeydaarsadeen dhinacyada dagaalamay, balse aan la sheegin khasaaro dadka Rayidka ah kasoo gaaray dagaalka.
Saraakiisha Ciidamada dowladda iyo kuwa AMIOSM ee Gobolka Hiiraan weli kama hadlin dagaalka, hayeeshee Al-Shabaab ayaa Baraha ay ku leeyihiin Internet-ka waxaa ay ku faafiyeen in weerarkaas ay ku dileen Sarkaal ka tirsan Ciidamada Jabuuti oo ay Magaciisa kuso koobeen Cismaan.
Wararkii ugu dambeeyay ee aan Maanta ka heleyno degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in dhaq dhaqaaqyo Ciidan iyo howlgallo ay halkaasi ka wadaan Ciidamada jabuuti & kuwa dowladda Soomaaliya.
Inta badan degaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolada dalka ayaa waxaa ka dhaca dagaalo u dhaxeeya Ciidamada dowladda Soomaaliya & kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo Al-Shabaab, kadib markii ay Al-Shabaab weeraraan Saldhigyada Ciidamada.
Previous articleXasan Sheekh oo shaaciyay saddex qodob oo sabab u ah khilaafka doorashada
Next articlePuntland oo Amartay in la xiro dadka diidan lacagta Shillin Soomaaliga